Photoshop Online ee Soomaaliya
Photoshop Online - Sida Loola Shaqeeyo Adobe Photoshop Online
Awoodda wax looga beddeli karo sawirro kala duwan oo leh Photoshop khadka tooska ah ayaa hadda laga heli karaa bilaash. Markii hore tan waxaa heli karay oo keliya dadka isticmaala ee lacagta qaata. Hadda waxaa loo heli karaa qof kasta oo doonaya inuu isku dayo barnaamijkan tafatirka ee xoogga badan. Marka sidee qofku u tagaa soo dejinta Photoshop khadka tooska ah bilaash? Hagaag waxaa jira dhowr siyaabood oo kala duwan oo aad ku soo dejisan karto barnaamijkan tafatirka muuqaalka weyn.
Haddii aad leedahay xisaabta Adobe waxaad si fudud uga soo dejisan kartaa Adobe Photoshop khadka tooska ah bilaash. Marka hore waxaad ubaahantahay inaad gasho xisaabtaada Adobe, kadib guji 'Adobe Photoshop' qeybta kore ee shaashadda oo dooro 'Download'. Waxaa lagu siin doonaa xulasho meesha aad jeceshahay inaad kala soo baxdo tifaftiraha sawirka. Waxay kuxirantahay goobahaaga, barnaamijkaaga naqshadeynta garaafka ee aad dooratay wuxuu ubaahan karaa inaad gujiso aagga 'hantida' si aad usii wado.
Hadda oo aad ka heshay Photoshop-kaaga khadka tooska ah waxaad u baahan tahay inaad go'aan ka gaartid nooca astaamaha tafatirka sawir ee aad jeceshahay inaad fuliso. Mar labaad, astaamaha aasaasiga ahi waa isku mid, laakiin waxaa jira xulashooyin dheeri ah oo dheeri ah oo ku jira nooc kasta oo Photoshop ah. Haddii aad raadineyso inaad ku qabato hawlo badan barnaamijkaaga tafatirka sawirkaaga, markaa waxaad xaqiiqdii ubaahan doontaa inaad raacdo nooc ay kujiraan waxyaabo farabadan oo faa iido leh Si kastaba ha noqotee, haddii aad raadineyso inaad kaliya si fudud u sameyso isbeddello iyo isbeddello ku saabsan sawirradaada, markaa waxaad u baahan doontaa inaad doorato nooc aasaasi ah oo Photoshop ah oo khadka tooska ah ku siiya qaababkan bilaashka ah.
Bixinta sifooyinka tafatirka aasaasiga ah, Photoshop sidoo kale waxay la socotaa dhowr casharro fiidiyoow ah oo sharxaya sida loo isticmaalo tifaftiraha sawirka. Qaybtani casharradu waxay waxtar badan u leedahay bilowgayaasha aan aqoon u lahayn dhammaan howlaha iyo qaababka Photoshop. Fiidiyowyadani sidoo kale waxay u fiican yihiin kuwa naqshadeeyayaasha garaafka ah ee doonaya inay wax badan ka bartaan aaladda tafatirka sawirrada iyo tabaha. Casharradan waxaa sidoo kale laga heli karaa websaydhka Adobe.
Waxa kale oo aad ka heli doontaa qolyo dhawr ah oo internetka ah oo digital ah oo aad ka daawan karto oo aad ka dooran karto sawirro iyo farshaxanno kala duwan oo laga heli karo Photoshop. Waxa kale oo jira dhawr keyd shaashad oo aad ka xulan karto Photoshop. Kuwaas waxaa ka mid ah Photoshop Night Light iyo Photoshop Morning Glow screensavers. Kaydiyayaashan shaashadda si ay kaaga caawiyaan inaad beddesho asalka shaashadda si dhakhso leh oo fudud. Marka lagu daro caawinta naqshadeeyayaasha garaafka inay abuuraan sawirro gaar ah, waxay sidoo kale bixiyaan gargaar ku saabsan la shaqeynta midabbada midabka, hagaajinta hufnaanta, iyo xulashada midabada gaarka ah. Waxaad sidoo kale arki kartaa thumbnails markaad waxbadan kabaraneyso qalabka tafatirka sawirada ee Photoshop.
Waxaa jira tiro ka mid ah qalabka tafatirka sawir kale iyo qaababka aad heli karto adiga oo bilaash ah khadka internetka sidoo kale. Astaamahani waxay gacan ka geysan karaan hagaajinta awoodda aad u leedahay inaad ku muujiso naftaada hal-abuur iyo sidoo kale inaad ku darto shaqeyn dheeri ah shaqadaada farshaxanka dijitaalka ah. Xitaa noocyada lacag bixinta ee Photoshop waxay leeyihiin dhowr ka mid ah astaamahan bilaashka ah ee bilaashka ah oo aan lagu heli karin qiimo dheeraad ah. Astaamahan waxaa ka mid ah aaladaha lagu saxo iftiinka iyo heerkulka midabka, hagaajinta cabirka shayga, iyo abuurista lakabyada iyo kala sooca.
Markaad la shaqeyneyso Photoshop khadka tooska ah, waxaad sidoo kale heli doontaa dhowr ikhtiyaar oo kala duwan oo loogu talagalay wax ka beddelka sawiradaada. Noocyada ugu fiican ee Photoshop-ka ah ee naqshadeeyayaasha garaafku u adeegsan karaan inay ku xoojiyaan shaqadooda waxaa ka mid ah ku darista qoraalka, adeegsiga aaladda garaafka, iyo hagaajinta sawirrada asalka ah. Qalabkan ka sokoow, Photoshop wuxuu awood u leeyahay inuu adeegsado miirayaasha iyo shaqooyinka kale ee qaabeynta qaabdhismeedka ah. Si aad ugubilaabto kuwan bilaashka ah ee Photoshop, waxaad ubaahantahay inaad soo dejiso barnaamijka. Dusha sare ee bogga Photoshop waxaad ku arki doontaa xiriiriye oranaya Download Photoshop Online. Dhagsii xiriiriyahan ayaa kuu geynaya bog aad ka dooran karto nooca barnaamijyada aad rabto inaad soo dejiso.
Markaad soo dejiso barnaamijka, waxaad bilaabi kartaa isla markiiba inaad la shaqeyso. Photoshop-ka khadka tooska ah wuxuu ku siinayaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad awood ugu yeelato inaad wax uga beddesho, u kaydiso, ugana wadaagto shaqadaada farshaxanka casriga ah kombiyuutarkaaga. Qalabkani waa mid aad waxtar ugu leh bilowgayaasha iyo sidoo kale xirfadleyda raadinaya inay xoojiyaan xirfadahooda ama ay isbedel ku sameeyaan sawirrada jira. Adoo soo dejinaya qalabkan khadka tooska ah ee kombiyuutarkaaga, waxaad bilaabi kartaa inaad ku raaxaysato dhammaan faa'iidooyinka waaweyn ee ay Photoshop ku siiso.